Sahannada laga bixiyo internetka - waa sida ay u shaqeyso waadna heli doontaa iyaga | Ebuno
Sahaminta lacag bixinta ah ee lagu bixiyay khadka tooska ah
Miyaad hore u aragtay xayeysiisyo loogu talagalay sahanno la bixiyay laakiin markaa isu beddelay oo keliya inyar oo dinaar la bixiyo markii la dhammaystiro? Ebuno, waxaan ku bixinaa sahanno lacag bixin ah oo khadka tooska ah laga bixiyo oo bixiya faa iido wanaagsan, badiyaa waxaan siineynaa toban daqiiqo oo lagu dhameystirayo toban karoon abaalmarin ahaan. Waxaan joognay ilaa iyo 2017 waxaanan horumarinay barxad gaar ah oo loogu talagalay dadka wax qora.
Sidee baaritaannadayada lacag-bixinta ah ay uga shaqeeyaan khadka tooska ah
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan bilaabin ka jawaabista sahannadeennu waa inaad iska diiwaangeliso koonto ku taal bartayada. Waxay u socotaa si dhakhso leh isla markaana ay kuu cadahay markaad ka jawaabeyso su'aalaha, way kuu sahlanaanaysaa inaad hesho sahanno aad ka jawaabto. Waa inaad ka jawaabtaa dhowr su'aalood oo hordhac ah si aad u buuxiso sahannada, laakiin marwalba waxaan isku dayeynaa inaan kugula mid dhigno baaritaanno ku habboon.
Waxaad dhibco ka heli doontaa dhammaan sahannada la dhammaystiray ka dibna waxaad u rogi kartaa lacag aad ku dhaaftay koontadaada PayPal. Waa deg deg waana fududahay in lacag lagaa siiyo mana aha kaliya dinaar laakiin waxaad kasban kartaa sifiican hadaad si joogto ah uga jawaabto sahankeena
Maxay yihiin sahannada laga bixiyo internetka?
Sahannada la bixiyay waxay ku saabsan yihiin wax yar oo ka mid ah wax kasta oo suurtagal ah adoo ka jawaabaya su'aalaha ugu horreeya, annaga oo ah Ebuno ayaa go'aan ka gaari kara haddii aad ku habboon tahay inaad ka jawaabto sahan gaar ah iyo in kale. Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan kuu soo bandhigno sahanno si aad si joogto ah lacag uga sameyso. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira caqabado kala duwan oo ku siin kara dhibco dheeri ah xitaa abaalmarino dheeri ah.
Badanaa sahankan waxaa lagu xushaa waxa aad la shaqeyso, meesha aad ku nooshahay, da'daada iyo wixii la mid ah. Waxaad si cad u arki kartaa qiyaas ahaan inta ay qaadan doonaan sahamintu iyo abaalmarinta aad heli doontid. Waxay ku siinaysaa fursad aad ku doorato iyada oo ku saleysan muddada aad qaadatay. Marka ay timaado waxa sahamintu ku saabsan tahay, waxay kuxirantahay shirkada bixisa. Badanaa waxay ku saabsan tahay waxa adiga macmiil ahaan uga fikirto dukaamada, shirkadaha ama alaabooyinka kala duwan. Shirkadaha ayaa markaa macluumaadka u adeegsada inay ku horumariyaan adeegyadooda.
Sida loo diiwaan geliyo
Tallaabada ugu horreysa markaad iska diiwaangelineyso Ebuno waa inaad geliso magacaaga, cinwaanka emaylka oo aad doorato lambarka sirta ah. Kadib waxaad ku xaqiijineysaa diiwaangelinta emayl aad naga hesho. Intaa ka dib, waa inaad buuxisaa macluumaadka ku saabsan waxa aad la shaqayso, meesha aad ku nooshahay, dakhliga guud ee qoyskaaga iyo su'aalaha kale ee naga caawiya inaan kuu dooranno sahanno adiga kugu habboon.
Waa inaad markaa buuxisaa cinwaanka PayPal ee aad rabto inaad abaalmarintaada bixiso iyo sidoo kale inaad xaqiijiso si aad u hubiso in lacagtu si sax ah u dhammaato. Markaad dhamayso diiwaangelinta, waxay qaadataa qiyaastii laba illaa saddex daqiiqo, waxaad bilaabi kartaa ka jawaabidda sahannada.
Ka caawi shirkadaha inay horumariyaan
Markaad buuxiso sahannada lacag bixinta ah ee khadka tooska ah lagu bixiyo, ma lihid oo keliya fursad aad lacag ku kasbato, waxaad kaloo ka caawisaa shirkadaha inay horumar sameeyaan. Jawaabahaaga ayaa muhiim u ah shirkadaha oo ka caawi inay horay u socdaan. Shirkaduhu waxay naga kireystaan ​​Enubo si aan u sameyno cilmi baaris xagga suuqa ah, oo aan adiga kaa bixinno.
Sahamintu waa hab adiga kuugu habboon inaad saameyn ugu yeelatid shirkadaha laga yaabo inaad horay uga soo iibsaneysay ama aad adeegyo uga iibsanaysay. Kuwani ma aha su'aalo adag oo waxaa badanaa jira dhowr ikhtiyaar oo jawaab ah oo aad kala dooran karto, marar dhif ah ayaad u baahan tahay inaad qorto jawaabo faahfaahsan.
Waxaa laga heli karaa taleefanka gacanta iyo kombiyuutarka labadaba
Waad ku mahadsantahay helitaankeena labada kumbuyuutar iyo mobiilba, waxaad sidoo kale buuxin kartaa sahannada markii ay kugu habboon tahay. Haddii aad waqti dheer ku qaadatay safar shaqo iyo ka soo laabasho, ma aha wax qalad ah inaad awoodid inaad lacag sameysato inta aad ku jirtid. Isla sidaas ayaa lagu dhaqmayaa haddii aad u baahato inaad baska sugto muddo dheer.
Intee in le'eg ayaan ka kasbadaa sahannada laga bixiyo internetka?
Inta aad shaqeysato waxay kuxirantahay sahannada ay ku saabsan tahay, qaarkood waxay bixiyaan inbadan halka kuwa kalena ay bixiyaan waxyar. Sidaan kor ku soo sheegnay, waxaad ku xisaabtami kartaa toban karoon muddo toban daqiiqo ah oo aad si firfircoon uga jawaabi karto ra'yi ururinta, laakiin sahannada qaarkood waxay bixiyaan si ka wanaagsan. Waxyaabaha kale, waa inay ku xirnaato heerka dhibka baaritaanka iyo shirkada noo shaqaaleysay si aan u helno dad doonaya inay ka jawaabaan.
Hal shay waa hubaal oo taasi waa inay fududahay oo ku habboon tahay in laga jawaabo sahannada internetka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa ka sii xiiso badan kaqeybgalka sahannada markii lacag lagaa siiyo. Anaga at Ebuno waa shirkad dhisan, shirkad iswiidhish ah sidaa darteed waxaad markasta ku kalsoonaan kartaa inaad hesho lacagtaada.